पूर्णिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई उपहार
काठमाडौं (अस) । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा स्थापित पूर्णिमा विकास बैंकले डिजिटल कारोबारलाई उत्प्रेरित गर्न एफ१ सफ्ट इन्टरनेशनलको सहयोगमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तामाझ डिजिटल २०२० नामक क्याम्पेन गरेको छ । उक्त क्याम्पेनमा गोलाप्रथाद्वारा बैंकका विभिन्न शाखाबाट मोबाइल बंैकिङ कारोबार गरिरहेका ग्राहकम...
अशोक लेल्यान्ड र ओम डेभलपमेन्टबीच कर्जा सम्झौता
काठमाडौं (अस) । अशोक लेल्यान्ड र ओम डेभलपमेन्ट बैंकबीच कर्जा सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी र आईएमई मोटर्सका भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए. खानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालमा आईएमई ग्रूप अशोक लेल्यान्डका गाडीको आधिकारिक विक्रेता हो । सम्झौता अनुसार...
ग्लोबल आईएमई बैंकको ३ ओटा शाखा सञ्चालनमा
काठमाडौं (अस) । ग्लोबल आईएमई बैंकले बिहीवार तीनओटा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले धनकुटा नगरपालिका–१, हिले बजार, सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका–६, नयाँ बजार र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका–१, दिक्तेल बजारमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बैंकले भाइबर बैंकिङ सेवा,...
एनआईसीका ग्राहकलाई चौराहा हस्पिटलमा छूट
काठमाडौं (अस) । एनआईसी एशिया बैंक र चौराहा हस्पिटल प्रालि, कालिकानगर, बुटवलबीच उपचार सेवामा छूटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका सम्पूर्ण ग्राहक तथा कर्मचारीेले चौराहा हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवा सुविधामा १० प्रतिशतसम्मको छूट पाउनेछन् । सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रदेश...
प्राइमले पारित गर्‍यो कन्काईलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं (अस) । प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधवार काठमाडौंमा विशेष साधारणसभामार्फत बैंकले प्राप्तिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । बैंकले कन्काईलाई प्राप्ति गर्ने समझदारी पत्रमा गत जेठ २२ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । प्राइम र कन्का...
सनराइजको शाखा नैकापमा
काठमाडौं (अस) । सनराइज बैंकले काठमाडौंको नैकापमा ११६ औं शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधवार चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरि र सनराइज बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य बच्छराज तातेड तथा शारदा शर्मा पुडासैनीले संयुक्त रूपमा बैंकको शाखा र एटीएमको उद्घाटन गरे । यससँगै बैंकका ११६ शाखा, ३८ शाखारहित सेव...
काँठेखोलामा सिटिजन्सको शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाडौं (अस) । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले बाग्लुङको काँठेखोला गाउँपालिका–२ मा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधवारदेखि सञ्चालन हुने उक्त शाखारहित सेवा बैंकको १०० औं सेवा हो । यसमा निक्षेप संकलन, रकम भुक्तानी, कोष स्थानान्तरण, मोबाइल फोनको बिल भुक्तानी, उपयोगी सेवाको रकम भुक्तानी,...
सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी अन्तरक्रिया
काठमाडौं (अस) । नेपाल राष्ट्र बैंंक, वीरगञ्ज कार्यालयको आयोजनामा बुधवार ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा’ विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ । कार्यक्रममा सहुलियत कर्जाको नीतिगत पक्षबारे नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थ...
नेशनलको राहत रौतहटका बाढीपीडितलाई
रौतहट (अस) । नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले रौतहटका बाढी प्रभावित स्थानका ग्राहक सदस्यलाई राहत वितरण गरेको छ । संस्थाले यमुनामाई गाउँपालिकाको सुकदेव चोकमा बुधवार करीब १०० ग्राहक सदस्यलाई प्रतिपरिवार २५ किलो चामलसहित खाद्यसामग्री वितरण गरेको हो । राहत वितरणमा प्रदेश नं. २ का भूमि व्य...